के शिल्पाले पति राजवाट अगल हुने योजना बनाएकी हुन् ? शिल्पाको साथीले खोलिन् रहस्य, शिल्पा आजकल राजको कुनै सामान पनि छुन चाहन्नन् – Jagaran Nepal
के शिल्पाले पति राजवाट अगल हुने योजना बनाएकी हुन् ? शिल्पाको साथीले खोलिन् रहस्य, शिल्पा आजकल राजको कुनै सामान पनि छुन चाहन्नन्
एजेन्सी । शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा १९ जुलाईमा अ श्लि ल फिल्म बनाएर अपलोड गरेको अभियोगमा पक्राउ परे । त्यसपछि बलिउड नायिका शिल्पाको जीवनमा पनि त्यसले निकै प्रभाव पारेको थियो । उनले करिब डेढ महिना सबै काम छोडेर घरमै बसिन् । शिल्पको परिवारको धेरै आलोचना भयो। अब भारतीय मिडियाले दावी गर्दै खेलेका छन् की शिल्पा र राज अब अलग हुँदैछन् ।
शिल्पाले राजवाट अलग हुने योजना बनाइरहेकी छिन्। राज कुन्द्राको कानूनी समस्याले शिल्पाको लागी समस्या पैदा गरेको छ। शिल्पाका एक साथीले अभिनेत्रीको घरमा भएका व्यक्तिगत निर्णयहरुका बारेमा केहि ठूलो खुलासा गरेकी छन्। शिल्पाको साथीले भनिन् ‘उनी (शिल्पा) लाई थाहा थिएन राजले हीरा लगायतका महंगा सामान कसरी किन्ने गरेका छन् ? यसबाहेक, उनको साथीले यो पनि भनिन् कि शिल्पा अब राजको सामान छुन पनि चाहन्न् ‘।
अभिनेत्रीको साथीले भनिन् कि शिल्पा आत्मनिर्भर छिन् र आफ्नो र आफ्ना बच्चाहरुको हेरचाह गर्न सक्छिन्। शिल्पाले उद्योगमा आफ्ना परिचितहरुलाई यो पनि जानकारी दिईन् कि उनी हं गा मा २ र निकम्मा पछि अन्य फिल्ममा काम गर्न इच्छुक छिन्। शिल्पा शेट्टीलाई निर्देशक अनुराग बसु र प्रियदर्शनले आफ्नो प्रोजेक्टमा भूमिकाको प्रस्ताव राखेका छन्।
हाल, अभिनेत्रीले यो जानकारी कती सही छ भन्ने बारे कुनै आधिकारिक बयान दिएको छैनन् । अर्कोतर्फ, राजबाट टाढा रहने निर्णयमा शिल्पाको राय के छ, समयले मात्र बताउनेछ। राज कुन्द्राको पो र्नो ग्राफी को घटनापछि, शिल्पासंग पनि वयान लिइयो । उनले आफ्नो पतिलाई निर्दोष भनिन् ।
उनका पति का मु क फिल्म बनाउँछन् त्यसलाई अ श्लि ल भन्न मिल्दैन शिल्पाको दावी थियो । शिल्पाले यस्तो कुरा गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरै ट्रोल भइन्। पछि शिल्पाले एक बयान जारी गरी उनको गोपनीयता दिन अपील गरीन्।